Ciidamada Xoogga dalka oo heshiisiiyay maleeshiyaad uu dagaal ka dhaxeeyay Lix sano – Bandhiga
Ciidamada Xoogga dalka oo heshiisiiyay maleeshiyaad uu dagaal ka dhaxeeyay Lix sano
Guutada 14-ka Oktoobar ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa ku guuleystay in heshiisiiyaan Maleeshiyo beeleed muddo 6 sano ah isku hor fadhiyay magaalada Marka ee Xarunta Shabeellaha Hoose.
Maleeshiyo beeldyada ayaa ku jiray dhufeys iyo aag dagaal lixdii sano ee la soo dhaafay waxaana ciidamadda dadaal dheer kadib ay ku guuleysteen in ay isugu keenaan barxad weyn oo ku taala bartamaha magaalada Marka.
Saraakiil katirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ka dalbaday labada dhinac iney ilaashadaan nabadda iyo dowladnimada si loogu midoowo dagaalka Al shabaab.
Dhibaato iyo nolol xumi ayeey ka dhaxleen labada dhinac intii ay colaadda ka dhaxeysay sida ay sheegeen horjoogayaasha labada dhinac waxaana ay balan qaadeen in ay ka shaqeynayaan horumarinta deegaankooda iyo xoojinta isku duubnida bulshada magaalada Marka.
Shacabka magaalada Marka ayaa isugu soo baxay fagaareyaasha magaalada si ay u muujiyaan dareenkooda farxadeed ee ku aaddan heshiisiinta dadkan walaalaha ah iyo dib u soo celinta isu socodka magaalada.